Dadka Sweden laga musaafuriyay oo lagu duray daawo sharci daro ah | Somaliska
Sida saakay lagu soo bandhigay baaritaan ay samaysay idaacada Sweden ayaa hay’ada qaabilsan maxaabiista ee Kriminalvården ay si sharci daro ah daawooyin u siisay dad laga musaafuriyay wadanka. Kriminalvården oo qaabilsan in ay wadanka ka saarto dadka sharciga loo diiday ayaa la sheegay in ay daawo madaxa dajisa ku dureen dadka qaarkood.
Sharciga wadanka Sweden ayaan ogolayn in qofka la siiyo daawo haddii usan isaga aqbalin ama uusan ahayn qofka ku jira maanakoobiyada. Idaacada ayaa soo bandhigtay in shaqaalaha Kriminalvården ay dhowr jeer cirbad ku dureen dadka wadanka laga musaafuriyay. Shaqaalaha ayaa qoray in dadka ay cirbada ku dureen ay ahaayeen kuwo kacsan oo naftooda iyo shaqaalaha waxyeelo u geysan lahaa. Laakiin quburada sharciga ayaa cadeeyay in taasi ay tahay sharci daro, oo aan marnaba la ogolayn in qofka lagu duro daawo qasab ah. Booliska ayaa la sheegay in ay mararka qaar gacmaha u qabteen dadka la duray.
Ka dib baaritaan dheer iyo suaalo kulul oo wariyaasha idaacada ay waydiiyeen madaxda Kriminalvården ayay qirteen qaladkooda iyagoo sheegay in ay booliska isku dacweyn doonaan. Dadka lagu duray cirbadaha sharci darada ah ayaa loo sheegay daawada la siiyay, iyadoo ay xaq u leeyihiin in ay maxkamad la fuulaan Kriminalvården. Balse dadkaas ayaa ah kuwo lagu celiyay wadamadii ay markii hore ka yimaadeen.
Laa xawla walaa quwata ellaa billaah ilaahow na amaanso
dadkan sxb somali ma ku jirtaa yaa war u haya iisoo sheega cidii war ka haysa
Aniga waxaan codsaday in leegu celiyo wadanka soomaali marka in lee duro malag yaabaa sxbta taa wax ha leega faa`iideeyo